Real Madrid oo guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Athletic Bilbao oo ay ku booqatay garoonka San Mamés… +SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Athletic Bilbao oo ay ku booqatay garoonka San Mamés… +SAWIRRO
Dajiye December 22, 2021
(Bilbao) 22 Dis 2021. Real Madrid ayaa guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Athletic Bilbao oo ay ku booqatay garoonka San Mamés, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee Real Madrid.
Daqiiqadii 4-aad kooxda Real Madrid ayaa durba hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Karim Benzema waxaana goolka ka caawiyay Toni Kroos.
7 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Karim Benzema ayaa markale gaaray shabaqa kooxda Athletic Bilbao, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineysay Real Madrid.
Laakiin 10 daqiiqo marka ciyaarta mareysay kooxda Athletic Bilbao ayaa dhalisay gool kaddib markii uu 1-2 dheesha ka dhigay laacibkooda Oihan Sancet, waxaana ka caawiyay goolkan Óscar de Marcos.
Balse ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-2 ay kaga soo adkaatay kooxda Athletic Bilbao oo ay ku booqatay garoonka San Mamés, Los Blancos ayaa ku hoggamineysay miiska kala sarreynta horyaalka Spain 46 dhibcood, waxayna 8 dhibcood nadiif ah ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Sevilla.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Athletic Club iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Isku aadka wareegga nus-dhammaadka tartanka Carabao Cup oo la sameeyay, is baddel ku imaan doono qaabka tartanka loo ciyaarayo & Taariikhda la dheeli doono